Izindaba - Kungani iphrofayili ye-aluminium ifa - ivula inkambiso ngokwengeziwe?
Iphrofayili ye-aluminium yezimboni uhlobo lwe-aluminium alloy extrusion ekhiqizwa yinkambu yezimboni imikhiqizo esetshenzisiwe. Ukwenza ngokwezifiso iphrofayili ye-Aluminium kusho ukuthi ngaphezu kwalabo abangu-20,30,40,50,60,80,90,100,120 nolunye uchungechunge olujwayelekile lwe-aluminium, iphrofayli ye-aluminium alloy nayo ingaba nokunye ukwakheka kwesigaba, ngakho-ke iphrofayili eyinqaba ye-aluminium die customization. Akukona ukwenza ngokwezifiso okwehlukile, ukwenziwa ngokwezifiso kuhlukile.
Iphrofayili ye-Aluminium die - inkambiso yokuvula iyinqubo nenqubo efanayo yokukhiqiza. Okungukuthi: ukukhiqizwa lokuqala isikhunta abafanelekayo, bese ulungiselela afanelekayo aluminium ingxubevange ibha, bese emshinini ukukhiqizwa extrusion kungaba. Isikhunta ngokuvamile senzelwe ngokusho kwesigaba esihle somsebenzisi, isigaba se-aluminium esihlukile, ukusebenza kanye nesisindo semitha yeyunithi nezinye izici azifani. Iphrofayili ye-aluminium evulekile ye-die nephrofayili ejwayelekile ye-aluminium akunomehluko, noma ngabe ukwelashwa ngezinto ezibonakalayo noma ngaphezulu, ngaphezu kokwenza ngokwezifiso, okunye kuyafana.
Eminyakeni yamuva, isabelo semakethe sokuvula isikhunta sephrofayili ye-aluminium nokwenza ngokwezifiso bekukhula. Isizathu esikhulu ukuthi ukukhuphuka kwemboni ezishintshayo kuqhube ukusetshenziswa kwemikhiqizo ehlukahlukene ye-aluminium alloy. Ngakho-ke imikhiqizo eminingi ye-aluminium alloy iye yathuthukiswa, ngakho-ke iphrofayili ye-aluminium die die custom more and more popular, is required more and more. Kunezigaba eziningi ezintsha, ezinjengama-zigzags, ama-zigzags nobujamo obungajwayelekile, kanye nokuqedwa kombala okwenziwe ngokwezifiso.
Ukwenza ngokwezifiso kube yigama elijwayelekile empilweni, elingaphansi kwesigaba sokunethezeka okukhanyayo okuvame ukushiwo ngabantu. Inkambiso yokuvula isikhunta se-Aluminium kungenye inkambu ye-aluminium alloy industry, le nkambu eyenziwe ngokwezifiso zomkhiqizo we-aluminium, isabelo sokuvula isikhunta sephrofayela ye-aluminium sikhulu, sisetshenziswa kabanzi, isidingo sokwenza izinto ezintsha nentuthuko ukuhlangabezana nemakethe eguquguqukayo.